ဝေခွဲမရသော incoming call no. များ အကြောင်း … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဝေခွဲမရသော incoming call no. များ အကြောင်း …
ဝေခွဲမရသော incoming call no. များ အကြောင်း …
Posted by etone on Jul 31, 2011 in Community & Society, Short Story |5comments
ဒီနေ့ ရုံးမှာ အင်တာနက် ကွိုင်ပတ်နေတာနဲ့ … ဘာမေးလ်မှလည်း မ၀င် ၊ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း ဆက်သွယ်လို့ မရတာကြောင့် … pending လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်လေးတွေ ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့ … အလုပ်ရှုပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာပေါ့ … ။ ဘရော့ဘမ်း ပြသနာ တက်နေလို့တဲ့လေ … အိပဲ့အိပဲနဲ့တော့ ပြင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါပဲ … ။ သုံးလို့မရတာ သုံးလေးရက်ရှိပြီ … အစကတော့ ဆာဗာ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်တယ် ပြောတာပဲ … အခုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး … ဘရော့ဘမ်းဖြစ်တာတဲ့ … ။ MCWill ထပ်ထည့်မယ်လည်း စဉ်းစားနေတယ်တဲ့ … ဘယ်မှာ ပြသနာရှိရှိ … စိတ်မ၀င်စားပါဘူး …. အင်တာနက်ပြန်သုံးရဖို့ပဲ အရေးကြီးတာလေ … ။ နေ့တိုင်း ၀င်ဖတ်နေကြ ဂေဇက်ထဲ မရောက်ဖြစ်တော့ … ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာနဲ့ … ရုံးချိန်ပြင်ပအပြင်မှာ သုံးဖို့ကလည်း ….ညနေပိုင်း နောက်အလုပ်တစ်ခု ပြေးရသေးတာကိုး ….. အိပ်ချိန်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ … စက်ရုပ်လူသားလိုပဲ … အရာရာတိုင်းကို အချိန်ကိုက်လုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ … အင်တာနက်မရတာကြောင့် … လတ်တလော အလုပ်ပါးပြီး နောက်ပိုင်း ခေါင်းကိုက်လောက်အောင် အလုပ်ရှုပ်မှာ မို့ … တွေးပြီး စိတ်ညစ်ရပါတယ် … ။
ဟိုလုပ် ၊ဒီလုပ် လုပ်နေတုန်း … ချမ်းချမ်းသီချင်းသံလေး ကြားမိလိုက်လို့ …. တိုးတိုးလေးလိုက်ညည်း မိလိုက်သေးတယ် … နောက်တော့ အသံက တဖြည်းဖြည်းကျယ်လာတယ် … ဘယ်သူများဒီလောက် သတ္တိကောင်းကောင်းနဲ့ ရုံးချိန်ကြီးကို သီချင်းဖွင့်ရဲသလဲ တွေးနေတုန်း … ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြန်လာနေတဲ့ သီချင်း စာပိုဒ်လေးကြောင့် … သတိဝင်သွားခဲ့ပါတယ် … ။ အော….. ကျွန်မဖုန်းသံပါ …။
အိမ်မှာ ဖုန်းအားသွင်းရင် မီတာတက် …. အဲ… အလကားပြောတာပါ …ဖုန်းအားသွင်းဖို့ မေ့နေခဲ့လို့ … ပလပ်ပေါက်လွတ်တဲ့ GM ရဲ့ စားပွဲနောက်မှာ ကဒ်ထူပုံးလေးပေါ်တင်ပြီး အားသွင်းထားတာ … အဲ့ဒီကဖုန်းမြည်တဲ့ အသံပါပဲ … ။ ကိုယ့်အနားက အသံမဟုတ်တော့ …သူများ သီချင်းဖွင့်တယ်ပဲ ထင်တာ … ။ ကျွန်မတို့ ခုံနားကပလပ်တွေ အပေါက်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ ကွန်ပျူတာတွေ ၊ စကန်နာတွေ ၊ပရင်တာတွေ သောင်းခြောက်ထောင် လိုင်းဆွဲထားတော့ … ဘယ်ပလပ်ပေါက်မှ မအားတာကြောင့် …. လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ သွားပြီး အားသွင်းထားရတာ … ။ ကျွန်မကြောင်အမ်းအမ်းနဲ့ သီချင်းလိုက်ညည်းကောင်းနေတုန်း …. ဖုန်းသံမှန်း သိသိချင်း ဖုန်းကိုင်မလို့သွားတော့ … ဖုန်းကကျသွားပါတယ် … ။ နောက် တမိနစ်လောက်အကြာမှာ ထပ်ခေါ်ပါတယ် … ။ 0039 နဲ့ စကာဆိုတော့ … အီတလီကပေါ့ … ။ အီးမေးလ်တွေ စာ မပြန်လို့ ဖုန်းဆက်ပြီး မေးတာဖြစ်မယ် …… အလုပ်ပါတနာတွေ စိတ်ကြီးကြပုံပါပဲ …. ဖုန်းလိုင်းက ကျလိကျလိသံရောနေတာကြောင့် … လိုတာပြောပြီး … ဖက်စ်ပို့ပါဆိုကာ ဖုန်းချလိုက်တယ် … တဖက်ကလူကလည်း သုံးမိနစ်အတွင်း ဖက်စ်ပို့မယ်ဆိုပဲ …. ။ ကျွန်မလည်း ဖက်စ်လေးနားမှာ ငုတ်တုတ်လေးသွားစောင့်တယ် … ဘယ်ဖက်စ်မှ မ၀င်ဘူး … ။ ဒါနဲ့ … ငါးမိနစ်လောက်ခြားတော့… ဖုန်းတခါ ထပ်ဝင်ပါတယ် … လိုကယ် ဂျီအက်စ်အမ် နံပါတ်နဲ့ပါ … ။ 095031 xxxx သိတဲ့ နံပါတ်မဟုတ်တော့ … ဇဝေဇ၀ါနဲ့ ဖုန်းကိုင်လိုက်တယ် … ။ ကြားရတဲ့ အသံက ခုနက ခေါ်တဲ့ အီတလီကပါတနာ အသံပါ … ။ ဟဲ့ ဘယ်လိုများဖြစ်သလဲပေါ့ … နင်ဒီကိုရောက်နေလားမေးတော့ … မရောက်ဘူးတဲ့ … ငါအီတလီမှာပါပဲတဲ့လေ … ။ ဖက်စ်က အလုပ်မလုပ်လို့ … မေးလ်ကို ညဘက်ဝင်စစ်ဖို့ချည်း အထပ်ထပ်မှာပြီး ဖုန်းချသွားပါတယ် … ။ အိုဗာစီးကောဆိုလျှင် ဒီဘက်မှာ တခါတလေ နံပါတ်မှန်ပေါ်တယ် … ဧရိယာကုတ်တောင် ပါသေးတယ် … ။ တခါတလေ … unknown no. ဆိုတာမျိုးပေါ်တယ် … အခုလို … လိုကယ် နံပါတ်ပေါ်ပြီး အိုဗာစီးကော ၀င်တာ ဒါနဲ့ဆို သုံးကြိမ်မြောက်ပါပဲ … ။ ဘာလို့မှန်းတော့ ကျွန်မလည်း သေချာမသိဘူးလေ … ။
ပထမတစ်ခါတုန်းက … ဂျာမဏီဘက်က ပါတနာက ဖုန်းခေါ်တယ်… နေပြည်တော် ငါးသိန်းဖုန်းနံပါတ်ဒီဘက်မှာ လာပေါ်တယ်… ကိုင်လိုက်မှ သူဖြစ်နေတော့ … ဘယ်မှာလဲမေးတော့လည်း … ဂျာမဏီမှာပါတဲ့ … ။ စဉ်းစားမရတာကို ဇွတ်မစဉ်းစားတော့ဘူး … မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေလိုက်တာပါပဲ …. ။ ဒီလိုနဲ့ … ညနေခင်းတစ်ခုမှာ …. ကိုရီးယားရောက်နေတဲ့ … သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖုန်းဝင်လာတယ်.. မြင်ကတည်းက 0082 ဆိုတော့ …ကိုရီးယားကမှန်းသိလို့ … စကားမပြောချင်တာနဲ့ … ကျွန်မ မကိုင်လိုက်ပါဘူး …. ။ ဘေးမှာကလည်း ကျွန်မ ချစ်သူ ရှိနေတာကြောင့် …ဖုန်းမကိုင်ဖြစ်တာပါ… ။ သူက သဘောထား သေးသိမ်ပြီး အူတိုတတ်တဲ့ လူတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ …. သူဘေးမှာ ရှိနေတုန်း တစိမ်းယောကျာင်္းလေး သူငယ်ချင်းဖုန်းဝင်လာတာ … ဘယ်လို စကားကောင်းကောင်းပြောလို့ရပါ့မလဲနော် … တော်ကြာ တဖက်ကလူကိုလည်း ….စကားပြောရတာ အနှောက်ယှက်ဖြစ်လျှင် အားနာနေရာမှာမို့ … ဖုန်းမကိုင်လိုက်တာပါ …. ဟိုတယောက်ကလည်း … အတော် အားနေတယ်ထင်ပါရဲ့… ဇွဲရှိရှိနဲ့ ခေါ်တယ် …သုံးလေးကြိမ် ဆက်တိုက်ပဲ … ။ အကြိမ်တိုင်း နံပါတ်က 0082 xxxxxxxxx ချည်းပေါ်နေတာမို့ …ကျွန်မထမကိုင်ပါဘူး .. ။ ဖုန်းမကိုင်တော့ … မဆက်လောက်တော့ပါဘူး ထင်ပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နဲ့ …ကော်ဖီသောက်ထားတဲ့ပန်းကန်တွေ ဆေးနေတုန်း … ဖုန်းတခါထမြည်တယ် … သူက နံပါတ် သုံးလုံးပဲပေါ်တယ်ဟေ့ … အဲ့ဒါဘယ်သူလဲတဲ့ … နံပါတ်ကလည်း 000 ချည်းပေါ်နေတာဆိုတော့ ..ကျွန်မလည်း မသိဘူး ကိုင်ချင်ကိုက်လိုက်လို့ … ပန်းကန်ဆေးနေတုန်း လှမ်းအော်လိုက်တယ် …. ။ သူကိုင်လိုက်တော့ … ကိုရီးယားက တယောက်ဆက်တာဆိုပဲ … ။ အေးအေးဆေးဆေး သူပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် … ကျွန်မအခု မအားလို့ … နောက်မှ ပြန်ဆက်ချင်ဆက်ပါလို့လည်း မှာလိုက်တယ်တဲ့ … ။
ဒီလိုနဲ့…ညဘက် အလုပ်ပြီးလို့ အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာ … ဖုန်းဝင်လာပြန်တယ် …… 09516 နဲ့ စတဲ့ ဖုန်းမို့ … လိုကယ်ဖုန်းတော့ ဟုတ်ပါရဲ့ …နံပါတ်ကလည်း အသစ်ပါပေါ့ … ဘယ်သူများလဲ ဒီအချိန်ကြီးတွေးရင်း ဖုန်းကိုင်တော့ … ဟိုကိုရီးယားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဘော်ဒါ … ။ သာကြောင်းမာကြောင်း မေးဖို့ … ဇွဲရှိရှိနဲ့ ဆက်တဲ့ ဖုန်းပါပဲ … ။ တကယ်ကို စိတ်လေသွားပါတယ် ….. ။ ကျွန်မတို့ဒီမှာတောင် အိပ်ချိန်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့…သူတို့ဆီမှာ သန်းခေါင်ကျော်ပါ … ။ စကားနည်းနည်းပြောပြီး … နှုတ်ဆက်ကာ ဖုန်းချလိုက်ရပါတော့တယ် … ။
ဘာလို့ … အိုဗာစီးကောမှာ လိုကယ်နံပါတ်တွေ ပေါ်နေသလဲ … ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်တွေများ မှားချိတ်မိနေသလားတော့ မပြောတတ်ဘူး … ။ မကိုင်ချင်တဲ့ ဖုန်းတောင်မှ …. နံပါတ်တလွဲပေါ်လို့ ကိုင်မိရက်သား ဖြစ်သွားရတဲ့ အဖြစ်မို့ … ဘယ်ဒင်းကို ပြသနာရှာရမှန်းမသိတော့ပါဘူး … ။
ကြံကြံဖန်ဖန်တွေးမိတာလေး ရှိသေးတယ် … ကျွန်မဆီကို အဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့ လိုကယ်ဖုန်းတွေဝင်တာတော့ ဟုတ်ပါ့ရဲ့ … ဖုန်းနံပါတ်တွေကလည်း တကယ်ရှိမယ့်နံပါတ်တွေပါ … … အဲ့ဒါဆို သူတို့ ဘေလ်ထဲမှာများ … ခေါ်ဆိုခ သွားနှုတ်သလား တွေးစရာပါပဲ … ။ ကျွန်မလို အိုဗာစီးကောကို လိုကယ်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ်တဲ့ အဖြစ်ပျက်လေးတွေ ရှိလျှင်လည်း … ပြောပေးကြပါဦးနော် … ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဖုန်းဘေလ်တွေ ကမောက်ကမဖြစ်နေခဲ့တာလည်း … အဲ့ဒါတွေ ကြောင့်များလားလို့… မဆီမဆိုင် တွေးမိပါတော့တယ် ။
ဘယ် သူမှလည်း မဖြစ်ဖူးဘူးလား ဟင် .. နာပဲ အူလည်လည် ဖြစ်တာ လား ။
ဖြစ်တယ် etone ရေ
ခုတလောခဏခဏကြုံနေရပါတယ်။ miss call ဖြစ်သွားလို့ပြန်ခေါ်ရင်ဘယ်တော့မှ လိုင်းမအားပါ။ နံပါတ်စိမ်းနေလို့ တခါတလေမကိုင်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေတောင် နင့်ကိုငါဖုန်းခေါ်တာမကိုင်ဘူး။ ငါ့ miss call မတွေ့ဘူးလားမေးမေးနေလို့ သူတို့ရွှီးနေတယ်ထင်တာ။ နောက်ခဏခဏဖြစ်မှသတိထားမိတာ။
ဟုတ်ပ အခုတစ်လော အိုဗာစီးကော တော်တော်များများဝင်လာရင် လိုကယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေါ်နေတက်တယ်
ဟိုနေ့ကလဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လှမ်းဆက်တာ ပထမတစ်ခါတော့ စကာင်္ပူဖုန်း နံပါတ် အမှန်ပေါ်ပြီး
နောက်တစ်ခါပြန်ခေါ်တော့ လိုကယ်နံပါတ်ကြီးနဲ့ပေါ်နေတာလေ ….
နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်..ဟိုနားဒီနားခေါ်တာတောင် တစ်ခါတစ်လေကျရင် ဖုန်းမ၀င်ဘူးဗျာ.. တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဖုန်းလိုင်းတွေပဲ
Shar Thet Man (98260 Kyats )